Published July 7, 2021 at 9:10 AM CDT
Akkaata gabaasa U.S department kan agriculture Midwest Climate Hub Iowa keessati roobni muraasni jiraani mul’atus jia darbe kan keessa akka hoogen uumame jiru himan. Dennis akka har’a jedhetti jia bona hafe kana keessa akka haali rakkisa tauu maluu hime. Baayinnan Iowa keessati rooba gogiinsa kan hanbisuu akka argachuu danda’an himan.
Har’aa akka jedheti gogiinsi kun waggaa 20 keessati kan hin uumamin akka tauu maluu himan akkasumas Midwest keessati torbaan dhufuu keessa akka rooba argachuu malan himan.
BoardIowa kan Utilities akka guyyaa har’aa himanitti bishaan Iowa Ameerica akka irrati murtaahe jiru himan. Ajajni kunis kan dhufee June 28 yoo tau erga jia 10 tureedha. Campany investment kunis gara doolara million 87 improvement system bishaan duuba akka jirus himani jirani.
Karoori haara kan Bidenadministration seera haarawa kan warra akka qoteebulaa kan horii, lukkuu,fihogs kan horsiisan fedhii isaani kan eegu seera haarawa baasu aka jiru himan. Seeri kunis agriculture keessati akka baaye fayaduu kan tau akk atae himan.
Siouxlandn DistrictHealth Deparmtment talaali coronavirus guyyaa kamsaa July 8 seaati 3:00pm – 5:00 pm bakka lobby Martin Luther King, Jr. bakka dowtown ground Trasnportation kan kennu akka tae himan.
Talaali JohnsonandJohnson jiraattota Iowa umriin isaani 18fi sanii oltae kan kennamu ta’a. namni achiti galmaahu nidanda’a dura galmaahun hinbarbaachisu.
Publicvaccineclinic bakka ummani jiruu dhaqee akka kennuufi kun ammoo nama talaali kana fudhatu waan baayisu dandauufidha ammati WoodburyCounty keessati namni talali kana fudhate jiru 39% akka tae himan.
Oromo News 07/02/2021Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.Iowa keessatti rooba guddaa,snowfi…